Cawaaqib xumada Cilmaaniyadda – Xeernews24
11. Juli 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Dire-dhaba,(XeerNews) Monday, July 11, 2016 09:50:53
Cilmaaniyadu waxa ay dunida reer galbeedka ka soo shaac-baxday qarnigii 17aad ilaa qarnigii sagaal iyo tobnaadna waxa ay ku faaftay wadamo badan
Waa Maxay Cilmaaniyadu?
Cilmaaniyadu waxa ay dunida reer galbeedka ka soo shaac-baxday qarnigii 17aad ilaa qarnigii sagaal iyo tobnaadna waxa ay ku faaftay wadamo badan oo bariga dhexe ku yaal oo ay ugu horeeyaan, Masar, Turkiga, Iiraan, Lubnaan, Suuriya iyo wadamo kale
· Qayb ka mid ahi waxa ay diidan yihiin jiritaanka ilaahay
· Qaybo kalena Ilaahay way rumaysan yihiin, laakiin waxa ay aaminsan yihin in aanay wax xidhiidh ahi ka dhexayn illaahay iyo noolaha.
· Waxa kale oo ay aamisnan yihiin in la kala saaro diinta iyo nolosha, noloshana lagu dhiso caqli cilmi iyo tijaabooyin
· In lagu dhaqmo mabda loo yaqaan (Pragmatism) oo ay yidhaahdaaan waa aragti ku habboon dhamaan qaybaha nolosha.
ü Sahan lagu tirokoobay gaboodfalkii ay la kulmeen ardayda dhigata dugsiyada kaniisadda ee loo tababaro in ay noqdaan xerta Baaderiga weyn, 80% iyagoo tiiraanyeysan waxa ay hoosta ka xariiqeen in ay Baaderiyadu faraxumeeyeen yaraantoodii.
ü Diin la’aan darted sida xoolaha ayaa loo dhaqmay waxaana laga tegay guurkii oo waxa lagu bedelay isla-noolaahso la macna ah dhilleysi ka mid noqday nolol maalimeedka bulshada.
ü Diin la’aan baahday ka dib dalalka reer galbeedku waxa ay dib u soo nooleeyeen dhaqan xumadii lagu halaagay qowmkii Nebi Luud” SC”. Kiniisad ku taala dalka Denmarki qaybteed lagu magacaabo “ Lutheran” ayaa markii ugu horaysay sharciyeysay guurka lammaane isku jinsi ah. Taasi oo nuxurkeedu yahay in laba nin is-khaniisaan amma laba naagood is-fara-fareeyaan.
ü Xaalku meel fool-xun ayuu ku biyo-shubtay, olole socday muddo sannado ah ka dib, waxa la arkay Baaderi Khaniis ah” Gay Bishop” in uu madax ka noqdo Kiniisadda, loona aqoonsado weli-karaameysan oo xidhiidhiya Alle iyo adoomadiisa, waana diin la’aan iyo dadnimo la’aan tii ugu weynayd ee abid la arko. Nin dabadiisa xafidi waayey in diin madax looga dhigo waa mucjiso maanka fayow diidaan yahay. Sidoo kale heerkaasi waxa si ka sii xun gaadhay diinta yuhuudda oo maant magac ahaan u jirta, balse aan lagu dhaqmin.
Hoteel Casri ah oo magaalada Muqdisho dhismihiisa laga wado(sawiro) Dawlada Ruushka oo qiraday in Diyaarad dagaal lagaga soo Riday Dalka Suuiya